Sony Xperia XA3 Plus isi nkọwa nkọwa na Geekbench | Gam akporosis
Sony yiri ka Xperia XA3 Plus dị njikere, a ufọt ufọt nso ọnụ ọnụ ga-kụrụ ahịa dị ka onye nọchiri ndị Xperia XA2 Plus. A na-eche nke a n'ihi ọdịdị ya na nso nso a na Geekbench n'okpuru aha njirimara H4493.
Agbanyeghi na benchmark akọwaghị ya dịka Xperia XA3 Plus, koodu ọnụọgụ aha na otu nchekwa data ahụ na-agbaso usoro isiokwu a, ya mere, dị ka ọ dị taa, anyị nwere ike ikwenye ịdị adị nke ama ama a na ọbịbịa ya dị anya n'ahịa.
Dabere na data nyere Geekbench, ekwentị na-esote nke usoro Xperia XA abịa na gam akporo 8.0 Oreo sistemụ arụmọrụ. Na mgbakwunye na nke a, ndepụta ahụ na-ekpughe na ọnụ ahụ na-akwadebe Qualcomm Snapdragon 660 System-on-Chip, ihe na-abughi anyị oke, dịka anyị tụrụ anya ịchọta SD670 ma obu a SD710, na-achọkwu ihe. N'agbanyeghị nke ahụ, nke ikpeazụ a na-anọchi anya nnukwu ọganihu na mgbawa ejiri ya bu ụzọ, nke bụ SD630.
Ihe nlere anya na-enyekwa anyị ozi dị mkpa: RAM. Dika nke a, ngwaọrụ ahu biara na ikike 6GB -5.735MB, ka o di. N'otu oge ahụ, ọ na-akọwa ọnụọgụ ọnụọgụ na ọnụọgụ nke nhazi ahụ ekwuru, nke ọ na-edeba ihe ruru asatọ na ọsọ ọsọ kachasị nke 2.21GHz.
Na njedebe, ọ na-agbada na nsonaazụ abụọ: 853 isi na otu-isi ngalaba na 4.172 na multi-isi ngalaba. Nke a abụghị ihe na-adọrọ mmasị, mana n'ihi nchikota dị iche nke Snapdragon 660 na 6GB nke RAM, ama ama karịrị nkezi.
N'ikpeazụ, ọ ga-ahụ kwuru na Nkọwapụta Xperia XA3 Plus ndị a anaghị ekwe nkwa, n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ịkwado ha, na ọkwa, mgbe ọ na-ekwupụta ọkwa ya, ihe anyị na-agaghị anọ na-ahụ anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sony Xperia XA3 Plus gosipụtara na Geekbench: nkọwapụta igodo gosipụtara
Dabere na DisplayMate, ihuenyo nke 9 Galaxy Note kacha mma na ụwa nke telephony